Sea Battle22.0.11 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.0.11 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Sea Battle 2
Sea Battle2၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ပင်လယ်ပြင်တိုက်ပွဲ2ယခု feature အသစ်များနှင့်တစ်ဦးတိုးချဲ့အာဆင်နယ်အသင်းနှင့်အတူအားလုံးကလေးဘဝကတည်းကလူသိများပါတယ်ဂိမ်းပါ! ကမ္ဘာတဝှမ်းကလူသန်းပေါင်းများစွာကဒီဂိမ်းကိုဆော့ကစား။ သင်ဟာသင်္ဘောများ, လေယာဉ်, ရေငုပ်သင်္ဘောများ, သတ္တုတွင်းများ, ရေဒါနှင့်သင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာအများကြီးပိုရလိ​​မ့်မည်။ , ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်တွင်သင့်သင်္ဘောများနေရာအတွက်ပြိုင်ဘက်ရဲ့တိုက်ခုိုက်, နှင့်ပြိုင်ဘက်ရဲ့သင်္ဘောများနစ်မြုပ်ရန်သင့်ကျယ်ပြန့်လက်နက်တိုက်ကိုအသုံးပြုပါ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာ Create နှင့်သင်၏ပြိုင်ဖက်တစ်ခုတည်းအခွင့်အလမ်းမချန်မထားဘူး!
ပင်လယ်ပြင်တိုက်ပွဲမျက်စိကိုဖမ်း notepad စတိုင်ဂရပ်ဖစ်နှင့်ဂိမ်းရဲ့မူလနဲ့တစ်ဦးမမေ့နိုင်သောလေထုမှ add အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုပေးထားပါတယ်!
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကနေပြိုင်ဘက်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်! သင့် platform ကိုခုခံကာကွယ်! အသီးအသီးကစားသမားနောက်ဆုံးရလဒ်သတ်မှတ်နိုင်ပါ!
တစ်ကလေးစစ်သားတစ်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်မှ - ဦးဝင်းအသစ်ရာထူးရယူဖို့တိုက်ခိုက်နေ!
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် Artificial Intelligence
ဆုံးသင့်လျော်သောအခက်အခဲအဆင့် Pick နှင့် AI (အတုထောက်လှမ်းရေး) အနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ရမှတ််ငွေနှင့်သင်၏ရာထူးကြီးထွား!
Bluetooth မှတဆင့် Play
Bluetooth ကိုကျော်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတိုက်ပွဲ, လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်ကျပန်းကစားသမားသို့ထိတွေ့ဆက်ဆံ။
တစ်ခုတည်းဖုန်း (တက်ဘလက်) ပေါ်တွင်သင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူ, Play, အလှညျ့အတွက်ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်တွင်သင့်သင်္ဘောများထားလက်နက်တွေကို select ပြီးစစ်တိုက်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမျှဝေ!
CHAT ကို AND PROFILE
built-in chat သုံးပြီးတိုက်ပွဲကာလအတွင်းသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်နဲ့ထိတွေ့နေဖို့လိုအပ်တယ်။ တစ်ဦးကိုကွောကျရှံ့ဖှယျအမည်နှင့်သင့်စင်းကိုတစ်ခုအလံရွေးချယ်ပါ။
SELECT နဲ့ configuration GAME Mode
ထိုဂန္သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ဂိမ်း mode ကိုရွေးပါ။ လိုအပ်ပါကသင့်ရဲ့အာဆင်နယ် modify ။
သင်၏ platform အထွေထွေအောင်ပွဲနှင့်အောင်ပွဲ၏အရေအတွက်အားဖြင့်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအပေါ်အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်လာ!
Sea Battle2အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Sea Battle2အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Sea Battle2အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Sea Battle2အား အခ်က္ျပပါ
seregadob8 စတိုး 3.72k 1.22M
Sea Battle2ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Sea Battle2အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.0.11
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://byril.com/policy.html
App Name: Sea Battle 2
Release date: 2019-08-23 04:38:28
လက်မှတ် SHA1: 0F:09:F4:95:62:95:25:9F:37:A2:93:DE:98:84:10:50:89:03:13:C8
Sea Battle2APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ